Kutengesa & Kudonhedza - Dhizaina Dhizaina
menyu Site navigation
Item yakawedzerwa kumotokari. Ona motokari uye tarisa.
20% Bvisa + Mahara Kutumira Yakatemerwa Nguva Chete!
Kutengesa & Kudonhedza
Kutsvaga mutengesi kuti ape bhizinesi rako uye unoda kutenga muhuwandu. Kutsvaga kwako kwapfuura uwane wega Wholesale discounts uye wova VIP nhengo. Tora zvinhu zvemhando yepamusoro zvemutengo wakachipa.
Iyo chati iripazasi inoratidza zvimwe zvezvibodzwa zvatinopa kune edu maVIP Nhengo.
Minimum Cart Kukosha Discount Percentage
$ 1,000.00 USD 30% Off
$ 1,500.00 USD 35% Off
$ 2,500.00 USD 40% Off
$ 4,500.00 USD 45% Off
$ 6,500.00 USD 50% Off
Ngatibatei mirairo yenyu muchimbozorora. Raira vatengi vako vachishandisa yako Nhengo Yendarama uye kuwana 30% Off mirairo yenyu nokusingaperi. Tora rutsigiro rwese rwaunoda nehupenyu hwevatengi rutsigiro, yekutevera yekuvandudza uye kuzadzikiswa.
Pashure pokupedzisa 50 mirairo inowana hupenyu hwese 50% Off pane mirairo yako yese.
Kuti uve nhengo ingo zadza bhokisi riri pazasi uye utaure kuti uri nhengo ipi yauri kutsvaga kuva nesu. Tichadzokera kwauri ipapo.
Nhamba yenhare mashoko
Gadzira Kudzoka kana Shanduko
Iva mune zivo
Kukurudzira, zvitsva nezvitengesi. Kwoga kubhokisi rako rekuda.
© 2021, Mugadziri Spot.